(ICG) – “Mariin biyyooleessaa furmaata rakkoo siyaasa Itoophiyaa ammaati!” Jedhe International Crisis Group. | OROMOTV
“Mariin biyyooleessaa furmaata rakkoo siyaasa Itoophiyaa ammaati!” Jedhe International Crisis Group
Dhaabbanni guddaan “International Crisis Group” jedhamu guyyaa kaleessaa Amajji 19,2020 dhimma Itoophiyaa irratti barruu murteessaa fuulbarruu isaa irratti katabee jira.
Dhaabbatichi rakkoo Itoophiyaan har’a keessa jirtu eereera. Rakkoolee biyyattii keessatti uumamaa jiran barruu sanaan kan ibse dhaabbatichi, dhimmi Itoophiyaa fala barbaaduu isaas hubachiisa.
Itoophiyaan kufaatii siyaasaa janaa fi kufaatii Dingadeef saaxilamtee jiraachuu ishee Xiinxaltoonni kan ibsanidha. Bara kana ammoo biyya waraana jabaa keessummeessaa jirtu keessaa tokko taatee jirti. Waraanni Itoophiyaan har’a keessummeessaa jirtu kan keessoo fi alaati. Waraanni alaas ta’e waraanni alaa kun ammoo biyyattii gaaga’amaaf saaxilaa jiraachuu miidiyaaleen gabaasaa jiru.
Qorannaa adeemsise kanaan dhaabbatni International Crisis Group kun siyaasa Itoophiyaa har’aaf fuulduraa gamagamuudhaan “Mariin siyaasa biyyooleessaa nii feesisa” ergaa jedhus dabarsee jira.
Dhaabilee Oromoo ABO fi KFO’n illee dhimma kana fakkaatu baatilee dheeraa dura uummataaf ibsa laataa turaniiru. Biyyattii keessatti marii hunda galeessa marii biyyooleessaa barbaachisa yaada jedhu kan qaban dhaabbileen Oromoo kunneen, yaada isaanii kan gabbisudha barruun “International Crisis Group” baase kaleessaa kun